Guides Archives - Nanolabs Blog
Website ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်အချက်တွေ လိုအပ်သလဲဆိုတာ သိကြပါသလား? Well-Designed Websites တွေက Business Owners တွေ Entrepreneurs တွေအတွက် brilliant ဖြစ်တဲ့ marketing platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့
U Bo Aye Cosmetics လုပ်ငန်းကို ဘာကြောင့် စလုပ်ဖြစ်တာလဲ။ အဖိုးအဖွား လက်ထက်ကတည်းက လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဝါသနာပါတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ဦးစီးပြီး
၁. စောစောထပါ ပုံမှန်ရုံးသွားရမယ်ဆို ရုံးချိန်မှီအောင် လုပ်ရတဲ့အတွက် စောစောထဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နေကုန် လန်းဆန်းပြီး Productive ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ရုံးသွားဖို့ အချိန်ယူစရာ မလိုတဲ့အတွက် နောက်ကျမှ အိပ်ရာထပြီး
“ကဲ ….. Demo ပြဖို့ အားလုံးအသင့်ပဲလားဟေ့” “ဟုတ်ကဲ့ နေ့လည်လောက်ဆိုရင်တော့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ ” “ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ။မနေ့ကတည်းက အားလုံးပြီးနေပြီ မဟုတ်လား။” “ဟုတ်ပါတယ်။ Code တစ်ချို့ပြင်လိုက်မိတာ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ ပြန်စစ်နေတာခင်ဗျ”
သင်က Tech အကြောင်း သိတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် သင့်အနီးအနားမှာ Tech Consultant တစ်ယောက် ရှိမယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ သုံးထားတဲ့ နည်းပညာကို အချိန်တိုတွင်းသိနိုင်မှာပါ။ ပထမဦးဆုံး လုပ်ရမှာက သူတို့ သုံးထားတဲ့
Software Company တစ်ခုကိုဘယ်လို outsource လုပ်မလဲ? အပိုင်း(၁) Software Company တစ်ခုရှာရတာ အရမ်း Challenging ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပိုက်ဆံတွေ အချိန်တွေရင်းထားရပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Result ထွက်